Nepali Rajneeti | कोरोना संक्रिमतमा देखियो नयाँ लक्षण , कतै तपाइलाइ त भएकाे छैन ?
कोरोना संक्रिमतमा देखियो नयाँ लक्षण , कतै तपाइलाइ त भएकाे छैन ?
माघ ४, २०७७ आइतबार ११८३ पटक हेरिएको
विगत ९ महिनादेखि विश्वलाई तनाव ग्रस्त पारेको नयाँ कोरोना भाइरसको लक्षण पत्ता लगाउन सुरुमा निकै गाह्रो भएको थियो ।
कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुमा ज्वोरो आउनु, थकाइ लाग्नु, श्वास प्रस्वासमा कमि आउनु, कफ हुनु सामान्य लक्षण हो ।
लण्डनस्थीत रहेको किङ्स कलेजका एपिडेमोलोजीस्ट प्रा. टिम स्पेक्टरले नयाँ कोरोना भाइरसको लक्षणलाई सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन् ।
यसमा कोरोना संक्रमणको लक्षण मुख खराब हुँदा पनि हुनसक्न जनाएका छन् ।
प्राय जसो संक्रमितमा मुखमा खराबी देखिएको, जिब्रोमा घाउँ आउने देखिने गर्दछ । यसलाई कोभिड टङ नामाकरण गरिएको छ ।
टिमले अनौठौ लक्षण यसलाई भनेका छन् । यो पाँच मध्ये एक व्यक्तिमा हुने जनाइएको छ । यसले जिब्रोमा अलसर निम्त्याउन सक्ने पनि विज्ञले जनाएका छन् ।
जिब्रोमा सेता प्रकारको दाग देखिएको र यो पूर्ण रुपमा कोरोना लक्षण भएको समेत टिमले जनाएको छ ।
कोरोनाबाट निम्तीएको लक्षण स्वतह एक हप्तापछि सामान्य अवस्थामा फर्किने गर्दछ ।
मुखमा खराबी भएपछि आफू जागरुक भइ स्वतह कोरोना परिक्षण गर्न जरुरी रहेको संक्रमण देखिएमा सेल्फ आइसोलेशनमा बस्नु पर्ने विज्ञहरुले सुझएका छन् ।